साढे दुई रुपैयाँको मास्कलाई १० रुपैयाँ लिनेलाई सरकारले यस्तो कार्बाही गर्ने घोषणा ! - समृद्ध नेपाल
साढे दुई रुपैयाँको मास्कलाई १० रुपैयाँ लिनेलाई सरकारले यस्तो कार्बाही गर्ने घोषणा !
साढे दुई रुपैयाँको मास्कलाई १० रुपैयाँ लिनेलाई सरकारले यस्तो कार्बाही गर्ने घोषणाकाठमाडौँ । कोभिडको मौका छोपी सर्जिकल सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले मास्कमा अनुचित मूल्य लिएपछि सरकारले कारबाही थालेको छ । अनुगमनका क्रममा कम्पनीहरूले प्रतिपिस मास्क २ रुपैयाँ ४ पैसामा होलसेललाई बिक्री गरेको पाइएको छ ।
तर सोही मास्क सर्वसाधारणले प्रतिपिस १० रुपैयाँभन्दा बढीमा किन्नुपरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ सर्जिकल सामानमा अनुगमन गर्दा उत्पादक र खुद्रामा मूल्यमा धेरै अन्तर देखियो विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले भने बढी मूल्य लिई उपभोक्ता ठगी गरिरहेका सर्जिकल हाउस/स्टोरलाई कारबाही गरिरहेका छौं ।
अबको अनुसन्धान थोक र खुद्रा विक्रेताको तहमा हुने उनले जानकारी दिए । विभागले शुक्रबार ज्ञानेश्वरस्थित अनुज स्टोर यू एन्ड बी स्टोर तथा आरएन स्टोरलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरेको थियो ।तीनवटै स्टोरको बिल पारदर्शी थिएन । खरिद र बिक्री बिल देखाउन नसकेपछि तीनै स्टोरलाई ५ हजार रुपैयाँका दरले कारबाही गरिएको सेढाईंले बताए । खरिद बिक्री बिल देखाउन नक्सनु भनेको अपारदर्शिता हो । यसले मूल्यमा धेरै असर पार्छ उनले भने । ती स्टोरलाई
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १५ बमोजिम बिलबीजक जारी नगरी ऐनको दफा ३८ (घ) अनुसारको कसुर गरेको हुनाले ऐन दफा ३९ (१) (क) बमोजिम प्रत्येक फर्मलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ । विभागले शुक्रबार नै भक्तपुरमा रहेको हिमालयन लाइफ केयर इन्डस्ट्रिजमा पनि अनुगमन गरेको थियो ।
पढ्दै-कमाउँदै गर्न सकिने यस्तो विद्यालय जहाँ व्यवसाय गर्न विद्यार्थीले ऋण पाउँछन् !
लाउरे र स्मिता संङगै मिले बस्ने भएपछि, घटनाले लियो नयाँ मोड पुन्य गैतम किन रोए ?
बलिवुडको चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानको निधन !
उदयपुरमा पनि मनायो धान दिवस !
अण्डा खानुस् शरीरको तौल घटाउन मन छ भने !
जन्मदै दुवै आँखा नभएका रमेश प्रसाईको यस्तो छ जिवन कहानी रुदै आमा भन्छिन् !
पढ्न मनै लाग्दैन ! अनि पढेकाे पनि छिट्टै बिर्सिइन्छ ? पढ्नुहोस् केही उपायहरू !
बाई-बाई बाबा होली खेलेर आउछु है भन्दै घरबाट निस्केका आमा-छोरीको दुर्घटनामा परि निधन !
उदयपुरको भुल्के १८ नम्बर बाहिनी अड्डामा सिटिजन्स बैंकले ए.टी.एम. सेवा शुभारम्भ गरेको छ !
‘जम्बो’ टोली लिएर सिंगापुर-थाइल्याण्ड भ्रमणमा गाउँपालिका अध्यक्ष !
को हुन यी युवती ? जो ‘बोल्ड’ तस्विरका कारण भाइरल बनिन् !